Myo Motor Car Sale Center တွင် SUZUKI New Super Carry Tru... | CarsDB
Myo Motor Car Sale Center တွင် SUZUKI New Super...
Myo Motor Car Sale Center တွင် SUZUKI New Super Carry Truck ကားသစ်ကို ဝယ်ယူနိုင်ပြီ
မော်တော်ယာဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ သက်တမ်း နှစ်၂၀ ကျော် အတွေ့ အကြုါရှိသော Myo Motor Car Sale Center တွင် SUZUKI Brand New Super Carry Truck ( အပြာ+အဖြူ ) ကားသစ်ကို ဝယ်ယူနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်.။ Suzuki Myanmar Motor co., Ltd မှ Super Carry ကုန်တင်ယာဉ်ငယ်ပစ္စည်းများကို Japan တွင် မှာယူပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ် ( Manufacture ) လုပ်ထားပါသည်.။ Super Carry ကုန်တင်ယာဉ်ငယ်သည် စွမ်းအားနှင့် စွမ်းဆောင်မှုတို့ ပေါင်းစည်းထားသည့်အပြင် သုံးစွဲသူ သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့် လွယ်ကူချောမွေ့မှု ရှိစေကာ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေနိုင်ပါသည်.။
မိမိတို့၏ အိမ်သုံး နှင့် လုပ်ငန်းသုံးအတွက် စိတ်ဝင်စားသူတိုင်း ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သော စူပါကယ်ရီကုန်တင်ယာဉ်ငယ်မှာ ထူးခြား ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး အမှန်တကယ် သင့်လျော်ပါသည်.။ လူကြီးမင်းတို့ သဘောကျလက်ခံနိုင်သော အချက်အလက်များမှာ ဂီယာ (၅) ချက်ပါရှိခြင်း၊ အင်ဂျင်ပါဝါ ၁၀၀၀cc4cylinder ဖြင့်ဖွဲ့ စည်းထားခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပြင်ဆင်ရာတွင် လွယ်ကူချောမွေ့ခြင်း၊ နေရာကျယ်ဝန်းပြီး နောက်ပိုင်းကိုယ်ထည်နိမ့်သဖြင့် လွယ်ကူစွာ ကုန်ပစ္စည်းများ အတင်အချပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊ တောင့်တင်းသော အောက်ခံဖရိမ်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားခြင်း၊ သော့ဖြင့် အပိတ်အဖွင့်လုပ်နိုင်သော ဆီတိုင်ကီအဖုံးပါဝင်ခြင်း တို့ဖြင့် သပ်ရပ်စွာ ဖွဲ့စည်းထားသည်.။ မြန်မာ နိုင်ငံ လမ်းစည်းကမ်း နှင့်ကိုက်ညီသော ဘယ်မောင်း စနစ် ဖြင့်တည်ဆောက်ထားခြင်း၊ warranty 2,0000 Mile ( သို့ မဟုတ် ) ၁ နှစ် အာမခံ နှင့် သုံးစွဲသူအမည်ပေါက် မှတ်ပုံတင်နိုင်ခြင်း တို့ ကြောင့် မြန်မာ ကားပရိတ်သတ် များကြိုက်နှစ်သက်သောကားတစ်စီးဖြစ်ပါသည်။
Durable body finish
ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကို တင်ဆောင်အသုံးပြုနိုင်ရန် စူပါကယ်ရီကုန်တင်ယာဉ်ငယ်ကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်.။ Cathodic Electrodeposition နည်းစနစ်ဖြင့် ခံဆေးထူထပ်စွာ သုတ်ထားသောကြောင့် သံချေးတက်ခြင်းမှ အထူးကာကွယ်မှု ပေးပါသည်.။
Detachable cargo bed
ယာဉ်ပိုင်ရှင်မှ လိုအပ်လျှင် လိုအပ်သလို ကုန်တင်ဘော်ဒီအား လွယ်ကူစွာ ဖြုတ်တပ် ပြုပြင် ပုံစံပြုနိုင်ပါသည်.။
Myo Motor Car Sale Center ကို 1998 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ယခုအချိန်ထိ နှစ်ပေါင်းကြာရှည်စွာ ကားအရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နေခဲ့သော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်.။ SUZUKI ကားကုမ္ပဏီ၏ Authorized Dealer အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိထားသော ကုမ္ပဏီလဲဖြစ်ပါသည်.။ ကုမ္ပဏီမှ ရောင်းချသော SUZUKI ကားသစ်များကို 1 year warranty ပေးအပ်ထားပြီး ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းများကိုလဲ Service လက်ခ အခမဲ့ဖြင့် ပြုပြင်ပေးနေပါသည်.။
Myo Motor Car Sale Center တွင် ရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများမှာ
- ဂျပန်နိုင်ငံမှ Model မြင့်မြင့် ကားသန့်သန့်များကို အမည်ပေါက်ဝယ်ယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်.။
- ယာဉ်အို၊ ယာဉ်ဟောင်း စလစ်ပိုင်ရှင်များ၊ မိမိကြိုက်နှစ်သက်သော ကားများကို Japan Auction မှ စိတ်တိုင်းကျ မှာယူတင်သွင်းပေးလျှက်ရှိပါသည်.။
- Model မြင့်မြင့်ကားများကို တင်သွင်းလိုသော မိတ်ဆွေများအား Import License လျှောက်သည်မှ အစ ယာဉ်မူသေနံပါတ် ရသည်အထိ One Stop Service ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးလျှက် ရှိပါသည်.။
Myo Motor Car Sale Center ကို ဆက်သွယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့
U AUNG MYO WIN ( Managing Director )
MYO MOTOR SERVICE CO., LTD
No. ( 192 ), East Horse Race Course Road, Tamwe Township,
Ph. (+951)-400123, 400399, 556685, 546345
မျောတျောယာဉျနှငျ့ပတျသကျ၍ သကျတမျး နှဈ၂ဝ ကြျော အတှေ့ အကွုါရှိသော Myo Motor Car Sale Center တှငျ SUZUKI Brand New Super Carry Truck ( အပွာ+အဖွူ ) ကားသဈကို ဝယျယူနိုငျပွီ ဖွဈပါသညျ.။ Suzuki Myanmar Motor co., Ltd မှ Super Carry ကုနျတငျယာဉျငယျပစ်စညျးမြားကို Japan တှငျ မှာယူပွီး မွနျမာနိုငျငံတှငျ တပျဆငျထုတျလုပျ ( Manufacture ) လုပျထားပါသညျ.။ Super Carry ကုနျတငျယာဉျငယျသညျ စှမျးအားနှငျ့ စှမျးဆောငျမှုတို့ ပေါငျးစညျးထားသညျ့အပွငျ သုံးစှဲသူ သကျတောငျ့သကျသာရှိမှုနှငျ့ လှယျကူခြောမှမှေု့ ရှိစကော ကုနျကစြရိတျ သကျသာစနေိုငျပါသညျ.။
မိမိတို့၏ အိမျသုံး နှငျ့ လုပျငနျးသုံးအတှကျ စိတျဝငျစားသူတိုငျး ရှေးခယျြစရာတဈခုဖွဈသော စူပါကယျရီကုနျတငျယာဉျငယျမှာ ထူးခွား ဆှဲဆောငျမှုရှိပွီး အမှနျတကယျ သငျ့လြျောပါသညျ.။ လူကွီးမငျးတို့ သဘောကလြကျခံနိုငျသော အခကျြအလကျမြားမှာ ဂီယာ (၅) ခကျြပါရှိခွငျး၊ အငျဂငျြပါဝါ ၁ဝဝဝcc4cylinder ဖွငျ့ဖှဲ့ စညျးထားခွငျး၊ ထိနျးသိမျးမှုနှငျ့ ပွငျဆငျရာတှငျ လှယျကူခြောမှခွေ့ငျး၊ နရောကယျြဝနျးပွီး နောကျပိုငျးကိုယျထညျနိမျ့သဖွငျ့ လှယျကူစှာ ကုနျပစ်စညျးမြား အတငျအခပြွုလုပျနိုငျခွငျး၊ တောငျ့တငျးသော အောကျခံဖရိမျဖွငျ့ တညျဆောကျထားခွငျး၊ သော့ဖွငျ့ အပိတျအဖှငျ့လုပျနိုငျသော ဆီတိုငျကီအဖုံးပါဝငျခွငျး တို့ဖွငျ့ သပျရပျစှာ ဖှဲ့စညျးထားသညျ.။ မွနျမာ နိုငျငံ လမျးစညျးကမျး နှငျ့ကိုကျညီသော ဘယျမောငျး စနဈ ဖွငျ့တညျဆောကျထားခွငျး၊ warranty 2,0000 Mile ( သို့ မဟုတျ ) ၁ နှဈ အာမခံ နှငျ့ သုံးစှဲသူအမညျပေါကျ မှတျပုံတငျနိုငျခွငျး တို့ ကွောငျ့ မွနျမာ ကားပရိတျသတျ မြားကွိုကျနှဈသကျသောကားတဈစီးဖွဈပါသညျ။
ပစ်စညျးအမြိုးမြိုးကို တငျဆောငျအသုံးပွုနိုငျရနျ စူပါကယျရီကုနျတငျယာဉျငယျကို တီထှငျထုတျလုပျထားပါသညျ.။ Cathodic Electrodeposition နညျးစနဈဖွငျ့ ခံဆေးထူထပျစှာ သုတျထားသောကွောငျ့ သံခြေးတကျခွငျးမှ အထူးကာကှယျမှု ပေးပါသညျ.။
ယာဉျပိုငျရှငျမှ လိုအပျလြှငျ လိုအပျသလို ကုနျတငျဘျောဒီအား လှယျကူစှာ ဖွုတျတပျ ပွုပွငျ ပုံစံပွုနိုငျပါသညျ.။
Myo Motor Car Sale Center ကို 1998 ခုနှဈတှငျ စတငျတညျထောငျခဲ့ပွီး ယခုအခြိနျထိ နှဈပေါငျးကွာရှညျစှာ ကားအရောငျးအဝယျလုပျငနျးမြားကို လုပျကိုငျနခေဲ့သော ကုမ်ပဏီဖွဈပါသညျ.။ SUZUKI ကားကုမ်ပဏီ၏ Authorized Dealer အဖွဈ လုပျကိုငျခှငျ့ရရှိထားသော ကုမ်ပဏီလဲဖွဈပါသညျ.။ ကုမ်ပဏီမှ ရောငျးခသြော SUZUKI ကားသဈမြားကို 1 year warranty ပေးအပျထားပွီး ပွနျလညျပွုပွငျခွငျးမြားကိုလဲ Service လကျခ အခမဲ့ဖွငျ့ ပွုပွငျပေးနပေါသညျ.။
Myo Motor Car Sale Center တှငျ ရရှိနိုငျသော ဝနျဆောငျမှုမြားမှာ
- ဂပြနျနိုငျငံမှ Model မွငျ့မွငျ့ ကားသနျ့သနျ့မြားကို အမညျပေါကျဝယျယူနိုငျရနျ ဆောငျရှကျပေးပါသညျ.။
- ယာဉျအို၊ ယာဉျဟောငျး စလဈပိုငျရှငျမြား၊ မိမိကွိုကျနှဈသကျသော ကားမြားကို Japan Auction မှ စိတျတိုငျးကြ မှာယူတငျသှငျးပေးလြှကျရှိပါသညျ.။
- Model မွငျ့မွငျ့ကားမြားကို တငျသှငျးလိုသော မိတျဆှမြေားအား Import License လြှောကျသညျမှ အစ ယာဉျမူသနေံပါတျ ရသညျအထိ One Stop Service ဖွငျ့ ဆောငျရှကျပေးလြှကျ ရှိပါသညျ.။
Myo Motor Car Sale Center ကို ဆကျသှယျခငျြတယျဆိုရငျတော့
Posted at: 27-05-2015 16:45 PM